Isizinda se-Ultrasonic Collagen kusuka eJellyfish - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Jellyfish collagen i-collagen ephezulu, ehlukile kodwa ibonisa izinto ezifanayo ukuthayipha i-I, II, III bese uthayipha u-V collagen.
Isizinda se-ultrasonic yindlela yokwenza imishini, eyandisa isivuno, isheshayo inqubo futhi ikhiqize izinga eliphezulu lezakhi zamathambo collagen.
I-Ultrasonic Jellyfish Extraction
I-Jellyfish icebile kumaminerali kanye namaprotheni, futhi i-collagen iyinaprotheni enkulu kulezi zidalwa ze-gelatinous zasolwandle. I-Jellyfish ngumthombo ovame ukutholakala olwandle. Ngokuvamile kubonakala njengenhlupho, ukusebenzisa i-jellyfish ekwenzeni i-collagen kuzuzisa kuzo zombili izindlela, ukukhiqiza i-collagen enhle kakhulu, ukusebenzisa umthombo wemvelo onomsoco, nokususa i-jellyfish blooms.
Isizinda se-Ultrasonic singumshini wokufakelwa kwe-mechanical, okungenziwa ukulawulwa ngokunembile futhi kuvumelaniswe ukuze kusetshenziswe izinto eziluhlaza. Isizinda se-Ultrasonic sisebenzise ngempumelelo ukuhlukanisa i-collagen, i-glycoproteins namanye amaprotheni avela ku-jellyfish.
Ngokuvamile, amaprotheni ahlukaniswe ne-jellyfish abonisa umsebenzi onamandla wokuvimbela i-antioxidant futhi ngakho-ke yizici eziwusizo eziwusizo zokukhiqiza ukudla, ukwesezela, kanye nezimboni zemithi.
Ukuze uthole isizinda, i-jellyfish yonke, i-mesoglea (= ingxenye enkulu ye-jellyfish isambulela), noma i-oral-arms ingasetshenziswa.
Isizinda se-ultrasonic yindlela ephumelelayo neyashesha yokukhiqiza i-collagen kusuka ku-jellyfish ngobuningi obukhulu.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Collagen Extraction
ukudla / i-pharma grade grade collagen
isisindo esikhulu semisipha
amino acid ukwakheka
I-Ultrasonic-Acid & Isisetshenziswa se-ultrasonic-enzymatic
Isizinda se-ultrasonic singasetshenziswa ngokuhlanganiswa nezixazululo ezihlukahlukene ze-acid ukukhulula i-acid soluble collagen (ASC) evela e-jellyfish. I-cavitation ye-ultrasonic ikhuthaza ukudluliswa kwamanzi phakathi kwe-jellyfish substrate nesisombululo se-asidi ngokuphula izinhlaka ze-cell futhi ukuxosha ama-acids ku-substrate. Ngalokho, i-collagen kanye namanye amaprotheni ahlosiwe adluliselwa ku-liquid.
Esikhathini esilandelayo, i-jellyfish substrate esele iphathwa nge-enzyme (okusho i-pepsin) ngaphansi kwe-ultrasonication ukuhlukanisa i-pepsin e-soluble collagen (PSC). I-Sonication yaziwa ngokukwazi kwayo ukwandisa umsebenzi we-enzyme. Lo mphumela usekelwe ekuhlakazeni kwe-ultrasonic kanye nokuguqulwa kwe-aggregate ye-pepsin. Ama-enzyme ahlakazekile ngokulinganayo ahlinzekela indawo eyengeziwe yokudluliselwa kwamanzi, okuhambisana nomsebenzi ophezulu we-enzyme. Ngaphezu kwalokho, amagagasi anamandla ama-ultrasound avula ama-collagen fibrils ukuze i-collagen ikhishwe.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi umphumela we-enzymatic (pepsin) osebenza nge-ultrasonically umphumela ekuvuneni okuphakeme kanye nenqubo yesikhashana esifushane.
I-UIP4000hdT (4kW) ultrasonic isizinda uhlelo
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonicators ye-Collagen Production
I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlelo ezinamandla ze-ultrasonic kusukela ebhodini kuya ebhentshini-phezulu kanye nezilinganiso zezimboni. Ukuze kuqinisekiswe ukukhishwa kwezinga eliphezulu, ukunikezwa kwezingane ezinokwethenjelwa ngaphansi kwezimo ezidingayo kungenziwa ngokuqhubekayo. Zonke izinqubo ze-ultrasonic zezimboni zingakhipha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
Amaprosesa aphezulu aphezulu avela ku-ultrasonic I-Lab ukushayela futhi Izimboni isikali.
UNicholas MH Khonga, uFatimah Md. Yusoff, B. Jamilah, Mahiran Basri, I. Maznah, Kim Wei Chan, Nurdin Armania, Jun Nishikawa (2018): Ukwenziwa ngcono kohlelo lwe-collagen kusuka ku-jellyfish (i-Acromitus hardenbergi) ngezinqubo zokwenyuka kwezinto ezenziwe ngokomzimba. Ukudla Kemithi Vol. 251, 15 Juni 2018. 41-50.
Guoyan Ren, Bafang Li, Xue Zhao, Yongliang Zhuang, Mingyan Yan (2008): Ubuchwepheshe bokukhipha ama-ultrasound ukukhishwa kwe-glycoprotein kusuka e-jellyfish (Rhopilema esculentum) ngomlomo-izingalo. Ukuthengiswa kwe-Chinese Society of Agricultural Engineering 2008-02.
U-Guoyan Ren, u-Bafang Li, u-Xue Zhao, u-Yongliang Zhuang, uMingyan Yan, u-Hu Hou, u-Xiukun Zhang, u-Li Chen (2009): Ukuhlolwa kwezindlela zokukhipha ama-glycoprotein avela ku-jellyfish (Rhopilema esculentum) ngomlomo ngokusebenza okuphezulu kwe-chromatography yamanzi. Umagazini we-Ocean University of China 2009, uMqulu 8, Issue 1. 83-88.
I-Collagen yiprotheni ene-fibrous ene-triple helix nesakhiwo esikhulu samaprotheni angenayo i-extracellular matrix nasesiswini esihlangene. Kunezinhlobo ezingaba ngu-16 zama-collagens kodwa eziningi zazo (cishe 90%) zingezokuthayipha I, uhlobo lwe-II, bese uthayipha III. I-Collagen yiyona amaprotheni amaningi kakhulu emzimbeni womuntu atholakala emathanjeni, emisipha, isikhumba kanye nama-tendon. Ezilwaneni ezincelisayo, kunika ama-25-35% kuwo wonke amaprotheni omzimba. Uhlu olulandelayo lunikeza izibonelo zama-tissue lapho izinhlobo ze-collagen ziningi kakhulu: Thayipha i-bone, i-dermis, i-tendon, i-ligaments, i-cornea; Thayipha i-II-cartilage, umzimba we-vitreous, i-nucleus pulposus; Uhlobo lwe-III-isikhumba, udonga lwesitsha, imicu ebonakalayo yamathambo amaningi (amaphaphu, isibindi, i-spleen, njll); Thayipha izitho zangasese ze-IV, Thayipha u-V ngokuvamile uvame ukuhambisa nge-Type I collagen, ikakhulukazi ku-cornea. Lokhu kwenzelwa ukuthi kusetshenziswe ukuxhaphazwa kwamabhizinisi ama-collagens amaningi (collagens I-V), ngokuzihlukanisa nokuzihlanza, ikakhulukazi ezivela kumuntu, ezikhunjini nasezikhungwini ze-porcine, ngokujwayelekile, okukhiqiza izinga eliphezulu lokukhiqiza izitshalo, okuholela ekugqibeni ama-collagen batches. (Silva et al., Mar. Izidakamizwa 2014, 12)
I-collagen endogenous i-collagen yemvelo eyenziwe yumzimba, kuyilapho i-collagen engavamile ihlanganiswa futhi ingavela emithonjeni engaphandle njengamaphilisi. I-Collagen ivela emzimbeni, ikakhulukazi esikhumbeni, amathambo namathishu ahlangene. Ukukhiqizwa kwe-collagen kunomzimba kunciphisa ngeminyaka futhi kufinyeleleke ezintweni ezifana nokubhema nokukhanya kwe-UV. Ezokwelapha, i-collagen ingasetshenziselwa ukugqoka ama-collagen ukulimaza amangqamuzana omzimba wesikhumba ukulimaza amasayithi.
I-Collagen isetshenziselwa kabanzi ekufakeni izithako kanye nemithi yokwelapha ngoba ingasetshenziswa kabusha. Lokhu kusho ukuthi kungaphulwa phansi, kuguqulwe, futhi kubuyiselwe emzimbeni. Kungabuye yenziwe ibe ama-solids acindezelwe noma ama-gels afana ne-lattice. Uhlobo lwayo lwemisebenzi ehlukahlukene kanye nesimo salo semvelo lenza kube nempilo ehlukahlukene futhi efanelekile ngezinhloso ezihlukahlukene zezokwelapha. Ukuze uthole ukusetshenziswa kwezokwelapha, i-collagen ingatholakala ku-bovine, porcine, izimvu, izilwane zasolwandle.
Kunezindlela ezine ezinkulu zokuhlukanisa i-collagen ezilwaneni: i-salting-out, i-alkaline, i-acid, ne-enzyme indlela.
Izindlela ze-asidi ne-enzymatic zivame ukusetshenziselwa ukuhlanganisa ukukhiqizwa kwe-collagen ephezulu. Njengoba izingxenye ze-collagen i-collagen ene-asidi-soluble (ASC) nezinye izingxenye i-collagen ene-pepsin-soluble (PSC), ukwelashwa kwe-asidi kulandelwa i-enzymatic extraction pectionin. I-acid collagen isizinda senziwa ngokusebenzisa i-acids efana ne-chloracetic, i-citric, noma i-lactic acid. Ukuze ukhulule i-collagen ene-pepsin-soluble (PSC) kusuka encwadini ekhona ye-acid ye-collagen yesikhulumi, inkinga engagudluki iphathwa nge-enzyme pepsin, ukuze ihlukanise i-collagen enesisindo se-pepsin (PSC). I-PSC ivame ukusetshenziswa ngokuhlanganiswa ne-0.5M ye-acetic acid. I-Pepsin iyi-enzyme evamile njengoba ikwazi ukulondoloza isakhiwo se-collagen ngokunamathela ku-N-terminal ye-protein chain ne-non-helix peptide.
I-Collagen isetshenziselwa izithako zokudla okunomsoco (imikhiqizo ye-nutraceuticals), imikhiqizo yezimonyo nemithi. Ama-Mammalian and sea (fish) collagen atholakala emakethe futhi angathengwa kunoma yikuphi okwanele. I-Jellyfish collagen uhlobo olusha lwe-collagen, okuyi-biocompatible yabantu kanye non-mammalian (okungekho mahhala). I-Jellyfish collagen ayifani nhlobo uhlobo oluthile lwe-collagen (uhlobo IV), kodwa lubonisa izindawo ezihlukahlukene ze-collagen izinhlobo I, II no-V.
Ama-glycoprotein atholakala ezinhlobonhlobo eziningi ezivela kubhaktheriya eya kubantu futhi abe nemisebenzi ehlukene. Lezi zinhlelo zamaprotheni ezinamaketanga ama-oligosaccharide amancane zibandakanya ekuqaphelisweni kwamaseli ama-hormone, ama-virus nezinye izinto emithinini eminingi yeselula. Ukwengeza, ama-antigens angama-cellular asebenza njenge-mucin ekusithekeni kwe-elemental matrix element, emathunjini kanye nase-urrogenital tract. Cishe wonke amaprotheni e-globular e-plasma ngaphandle kwe-albin, ama-enzyme afihliwe nama-protein ane-glycoprotein isakhiwo. I-membrane yeseli iqukethe amaprotheni, i-lipid ne-carbohydrate molecule. Inendima ye-glycoprotein esithombeni sekhanda, ngakolunye uhlangothi, ithinta inombolo kanye nokusabalalisa kwamaprotheni. Lawa maprotheni ahileleke ekushintsheni okuvela embranini kuya emthonjeni. Inombolo nokusabalalisa kwe-glycolipids nama-glycoprotein kunika iseli elithile.
Ama-glycoprotein anesibopho sokuqashelwa kwamangqamuzana, ukukhishwa kwe-cell membrane nokukhethwa kwamahomoni. Kunezinhlobo ezingu-7 eziyinhloko ze-monosaccharides engxenyeni ye-carbohydrate ye-glycoprotein. Lawa ma-monosaccharides ahlanganisa ukulandelana okuhlukeneko nezakhiwo ezihlangene, okuholela ekutheni inqwaba yezinhlaka zezinhlangothi ze-carbohydrates. I-glycoprotein ingaqukatha isakhiwo esisodwa se-N-linked oligosaccharide noma ingaqukatha uhlobo olungaphezu koyedwa lwe-oligosaccharide. Ama-oligosaccharide e-N axhunyiwe angase abe nezinhlaka ezifanayo noma ezahlukene noma angase abe khona oligosaccharides oxhunyiwe. Inombolo yamaketanga e-oligosaccharide ahluka kuye ngokuthi amaprotheni nomsebenzi.
Ama-asialic acids kuma-glycoprotein, isici se-glycocalyx, adlala indima ebalulekile ekuqapheliseni kwamaseli. Uma ama-sialic acids ebhujiswa nganoma yisiphi isizathu, isakhiwo se-glycocalyx sekhanda siyaphazanyiswa futhi iseli alikwazi ukwenza imisebenzi eminingi ecacisiwe. Futhi, kunezinye ze-glycoprotein ezakhiwe. Ziyi-fibronectin, i-laminins, fibronectin ye-fetal futhi bonke banemihlangano ehlukene emzimbeni. Futhi ku-glycoprothein eukaryotic, kunezinye i-monosaccharides ikakhulukazi ku-hexose nohlobo lwe-aminohexose. Bangasiza ekwenzeni amaprotheni, ukuthuthukisa ukuzinza kwamaprotheni futhi bahileleke ekuboniseni iseli.